Eyona indi inkulu ye-Indomethacin Api, Amoxicillin Trihydrate-Tecsun
APIS YOKUSETYENZISWA NGABANTU
I-NSP Enzyme kunye nee-enzymes ezininzi
Sibeka abathengi bethu kunye nomgangatho kwindawo yokuqala, sibonelela abathengi.
Singumvelisi oqeqeshiweyo. Uneminyaka eli-10 yokuthengisa kunye namava obuchwephesha
Sisekele iiarhente kwihlabathi liphela.
saseka iqela elihle, abanezakhono kunye namava kumatshini.
I-TECSUN PHARMA LIMITED yinkampani edibeneyo yesitokhwe eyasekwa ngonyaka ka-2005.
Ubume beshishini lwe-TECSUN ngoku kubandakanya ukuphuhlisa, ukuvelisa kunye nokuthengisa i-API, amayeza oluntu kunye nonyango lwezilwanyana, imveliso egqityiweyo yamachiza e-vet, izongezo zokutya kunye ne-Amino Acid. Inkampani ingamaqabane emizi-mveliso emibini ye-GMP kwaye ikwenziwe ubudlelwane obuhle kunye neefektri ezingaphezu kwe-50 ze-GMP, kwaye izalisekisa ngokulandelelana i-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ukuphucula kunye nokomeleza inkqubo yolawulo kunye nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho.
Ilebhu esembindini ye-TECSUN ivela kwaye yamiselwa zezinye iiyunivesithi ezintathu ezidumileyo ngaphandle kwe-TECSUN uqobo, ziyiYunivesithi i-Hebei, iYunivesithi ye-Hebei yeTekhnoloji, iYunivesithi i-Hebei GongShang.
I-Vitamin C, ekwabizwa ngokuba yi-ascorbic acid, sisondlo esinyibilikayo esibalulekileyo emanzini. Abantu kunye nabanye o ...
Imizila ifumana i-USFDA appr ...
Ulwazi malunga nenkampani Strings Pharma Science Limited, izabelo zokutshintshana Strides Pharma Science Limited (Strides) namhlanje.
Ukusilela kweVitamin B12 ...
Ukusilela kweVitamin B12 kunokwenzeka ukuba umntu akafumani ngokwaneleyo iivithamini kukutya kwabo, ...
Rm 1413, Bldg A, Jinyuan Commerce Plaza, Hayi. Indlela ye-152 ye-East Huaian, i-Yuhudistrict, iShijiazhuang 050031 China